बेवारिसे शव जलाउनेको कथाः शौचालयको पानी समेत पिएको छु
राज्यले पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको बेवारिसे शवको दाहसंस्कार गर्दै आएका व्यक्ति हुन् विनयजंग बस्नेत । उनले आफ्नै धन सम्पत्ति खर्चेर समाज सेवाको सुरुवात गरेका हुन् । उनै विनय हाल ‘बा आमा’ घरको निर्माण गरिरहेका छन् भने कूलत तथा लागूऔषधको दुव्र्यसनीमा फसेकाहरुलाई काउन्सिलिङ पनि गरिरेहका हुन्छन् । उनै विनयसँग नेपालीपत्रको लागि सुवास गौलीले गरेको कुराकानीको अंशः
तपाई निकै लामो समय कुलतमा फस्नुभएको थियो, यसको दलदलबाट कसरी निस्कनुभयो ?
तपाईले समाजले बुझ्नुपर्ने कुरा सोध्नुभयो । म झण्डै १३ वर्षसम्म कुलतको दलदलमा फसेको मान्छे हुँ । त्यसपछि म तीन महिना मनोसामाजिक उपचार पद्घतीमा बसे र जीवनलाई नियाले । त्यहाँ पुगेपछि मैले आफूले बाँचेको जीवनको बारेमा बुझ्ने मौका पाए । भनिन्छ नि ‘टु मच इगो विल किल यु’ भन्याजस्तै मलाई मेरै घमण्डले मारिरहेको थियो । आफन्त तथा साथीहरुले मलाई त्यो दर्दनाक अवस्थाबाट निकाल्ने प्रयास नगरेका होइनन् तर, मलाई आफ्नै त्यो कहालीलाग्दो प्यारो थियो । मैले व्यथित गर्दै आइरहेको जीवनमा उनीहरुले डाहा गरेको जस्तो लाग्थ्यो मलाई । तर, बिस्तारै मलाई त्यो अवस्था ठिक होइन रहेछ भन्ने लाग्यो । त्यो समयमा मैले मेरा परिवार, आफन्त, साथीभाई लगायत सबैलाई गुमाइसेकेको थिएँ । अनि, मलाई होइन अब म मेरो बचेको जीवनलाई राम्ररी जिउँछु भन्ने लाग्यो ।
तपाई त राम्रो परिवारमा नै हुर्कनुभएको मान्छे, कसरी कुलतमा फस्नुभयो ?
मेरो आफन्तहरुमा म जेठो छोराको रुपमा जन्मिएको कारणले गर्दा मैले परिवारबाट साँच्चै राम्रो माया पाएको थिए । म सधँै अरुको अंगालोमा हुन्थे रे । मेरो बुबा तत्कालिन महालेखाको सहसचिव । बुबाको हात समातेर हिड्दाँ पनि शान हुन्थ्यो । मायाकै कारण मलाई कसैले केही भन्न सकेनन् । मलाई भने घमण्डले पेल्दै गयो र म नराम्रो बाटोमा हिड्न पुगे । मेरो संगत पनि राम्रो भए । ‘एभ्वाइड ब्याड सर्कल’ भन्ने कुराको विपरित दिशामा म हिँडे ।
खासमा सुधारिएको जीवनले कस्तो अर्थ राख्दो रहेछ ?
अहिले सन्तोष गर्ने ठाउँहरु छन् । हिजोको दिनमा म आफ्नै कारणले जुन अवस्थामा थिएँ त्यो साँँच्चै कहालीलाग्दो थियो । मलाई कूलतमा नलाग भनेर सम्झाउनेहरुविरुद्ध मेरो खुसी खोस्न खाजेको भान हुन्थ्यो मलाई । आजको दिनमा मैले साँच्चै नयाँ जीवन पाएको छु । मैले छोरीको स्कुल फि तिर्न लगेको पैसा पनि रक्सी पिएर सक्याएको छु । सबैजना मबाट टाढा भइसकेका थिए । मैले खान नपाएका दिनहरु पनि छन् । सबैले नपत्याएर मैले शौचालयको पानी पनि पिएको क्षण छ । छोरीले मलाई बाबा भन्न छोडिसकेकी थिइन् । मेरो श्रीमतीले छोडिसकेकी थिइन् । अहिले ति सबै कुराहरुबाट म बाहिर निस्केको छु । बाँकी रहेका जीवन राम्ररी जिउने प्रयास गरिरहेको छु । अरुको सेवा गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छु । यसैकारण हिजो नपत्याएकाहरुले मलाई ऋण दिने भइसकेका छन् ।
बेवारिसे शव जनाउने सोच चाँहि कहाँबाट आयो ?
मेरो बुबा (श्याम बस्नेत)को मृत्यु पनि बेबारिसे भएको हो । बुबा झण्डै १५ वर्षअघि बिहानै गुरुबाकोमा जाने भनेर निस्कनुभएको थियो । त्यो दिन फर्कनुभएन । हामीले सोधखोज गर्दा टिचिङ अस्पतालको बेवारिसे शव गृहमा बुबाको शव भेटियो । बुबाको शवसँगै अन्य ५–७ वटा शव पनि थिए । उनीहरुको शव निकै क्षत विक्षत अवस्थामा थियो । शव गृहमा काम गर्ने एक व्यक्तिले उक्त शवहरु बेवारिसे हुन् । तपाईले चाँहि भेट्नुभयो उनीहरुको शव चाँहि यतिकै सड्छ भने । बुबाको शव ल्याएर दागबत्ति दिइरहँदा आर्यघाटका शव दहन गर्ने ठाउँहरु खाली देखेँ । उनीहरुको पनि दाहसंस्कार गर्न पाए आत्माले शान्ति पाउँछ भन्ने लाग्यो । बुबाको शव जलाउँदा–जलाउँदै एक दिन सुध्रिएर यही काम गर्छु भन्ने सोच पलाएको थियो । दाहसंस्कारमा पनि म एक्लो थिए । किनकी म बदनाम भइसकेको थिएँ । मलाई त्यो बेलामा नै यही काम गर्छु भन्ने लागेको थियो ।
खासमा तपाई अध्यक्ष रहनुभएको संस्था एक्सन फर सोसल चेन्ज के हो र यो कसरी चलिरहेको छ ?
एक्सन फर सोसल चेन्ज संस्थाको अध्यक्ष म छु । त्यस्तै, अन्य सदस्यहरु पनि सक्रिय भूमिकामा हुनुहुन्छ । यस संस्थाले शवको दाहसंस्कार गर्दै आएको छ । यसका पनि बिभिन्न चरणका प्रक्रियाहरु हुन्छन् । आधिकारिक निकायबाट स्वीकृति लिने कामदेखि घाटमा ल्याउँदासम्म चरणहरु अलग–अलग हुन्छन् । त्यस्तै, हामीले ‘बा आमा’आश्रमको निर्माण पनि थालिरहेका छौं । यस आश्रम गृहमा हामीले बेबारिसे व्यक्तिहरुलाई राख्ने सोच बनाएका छौं । भने कूलतमा फसेकाहरुको लागि परामर्शको काम पनि गरिरहेका छौं ।
अहिले हाम्रो संस्था टिक्न गाह्रो भइरहेको छ । साथीभाइहरुले सहयोग गरिरहनु भएको छ । तर, सँधै मागेर संस्था चलाउनु पनि राम्रो होइन भन्ने मेरो बुझाई छ । त्यसैले सुरुवातदेखि नै मैले यो कामको थालनी पैत्रिक सम्पत्तिलाई धितो राखेर १८ लाख कर्जा लिइसकेको छु । डेढ दुई लाख हाते ऋणहरु छन् । अझै पनि यसरी नै संस्था चलिरहेको छ । भक्तपुर जिल्लाबाट एउटा बेवारिसे शवको दाहसंस्कारको लागि ५ हजार रुपैयाँ आउने भन्नुभएको छ । तर, त्यो रकम पर्याप्त हुँदैन तै पनि यो समाचार हाम्रो लागि सुखद् हो । आफन्त, मेरा क्याम्पस पढ्ने साथी र, यो कार्यमा मेरो परिवारको भरपुर सहयोग छ ।
हालसम्म तपाईका हातले कति शवको दाहसंस्कार गर्नुभयो ? यी शवहरु जलाउने प्रक्रिया पनि छन् होला नि ?
हालसम्म मैले २०४ वटा शवको दाहसंस्कार गरिसकेको छु । यी शवहरु त्यसै जलाउन पाँइदैन । सुरुमा प्रहरीबाट मुचुल्का उठाउने काम हुन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित अस्पतालमा गएर पोष्टमार्टमा गर्ने काम हुन्छ । हामीले केही महिनाअघि प्रहरी प्रशासनसँगको छलफलपछि एउटा समिति बनाएका छौं । बेबारिसे शव जलाउने काम बिनयजीको संस्था ‘एक्सन फर सोसल चेन्ज’ भन्ने छ उक्त संस्थालाई दिने भन्ने कुरा भएको छ । २३ जिल्लामा हाम्रो शाखा पुगिसकेको छ । यी शाखाहरुसँगको समन्वयमा हामीले शव जलाउँदै आएका छौं । बेबारिसे शवको बारेमा मलाई खबर आउँछ ।
तपाईले शव जलाइरहँदा वा जलाईसकेपछि मृतकका अफन्तहरुले भेट्नुभएको छ ?
मलाई अहिलेसम्म ४–५ सय जना हराएका व्यक्तिहरुको फोटो प्राप्त भएका छन् । मेरो बुबा, आमा, भाई, साथी हराएको भन्दै फेला पार्नुभएको खण्डमा सम्पर्क गर्न भन्नुहुन्छ । मैले शव जलाइरहँदा पनि मृतकका आफन्तहरु आउनुभएको छ । एक जनाको शव जलाइरहँदा तीन जना दाजुभाई आउनुभयो र आजबाट हामी चार जना भयौं भन्नुभयो । त्यो समयमा मलाई निकै खुसी लागेको थियो, त्यो पैसाले किन्न नसकिने खुसी हो । तर, कतिपय मान्छेहरु हामी खोजिरहेका थियौं केही दिन राख्नुभएको भए हुन्थ्यो नि भन्नुहुन्छ । मैले प्रशासनको अनुमतिमा शव जलाउने भएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई प्रहरीहरुले जवाफ दिनुभएको छ । मान्छे बाँचुञ्जेल बेबारिसे तरिकाले बाँच्ने परिवारले वास्ता नगर्ने अनि मरेपछि पनि कुर्नुपर्ने यतिका दिन के गर्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ । मान्छे मरिसकेपछि चिन्ता गर्नुभन्दा पनि बाँच्दैमा केही गर्नुपर्छ भनेर नै मैले ‘बा आमा’घर निर्माण गरिरहेको हो ।
तपाईले थाल्नुभएको ‘बा आमा आश्रम’को काम कहाँ पुग्यो ?
यो आश्रम मेरो जग्गामा बनिरहेको छ । धेरै खर्च गरेर अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्न लागेको होइन । थोरै खर्चमा ट्रस्टलाई नै आश्रम बनाउन लागेको हुँ । अब यसको छनो हाल्ने र फनिसिङको काम बाँकी छ । यसको लागि पनि केही सहयोगहरु आएका छन् । हालसम्म यसको लागि साढे ७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, मलाई दिनभरी भागेर राति डिस्को गएकोजस्तो गर्नुछैन । सकेसम्म आफूसँग भएको झिकिरहेको छु । आफूसँग पैसा हुँदाहुँदै अरुको गोजीको पैसाले भात खानुछैन । कसैले आएर सहयोग गर्नुहुन्छ भने आश्रमको यो काम म गर्छु भन्नुहुन्छ भने सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
राज्यले गर्नुपर्ने काम विगत पाँच वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ । राज्यबाट पनि त अपेक्षा छ होला नि त ?
हामीलाई ललितपुर महानगरपालिकाले गज्जबको आश्वसन दिनुभएको छ । मलाई चिरिबाबु महर्जनले मेयर भइसकेपछि सहकार्य गरेर काम गरौं भनेर आफैले फोन गर्नुभएको थियो । सुरुसुरुका दिनमा उहाँले पाटन अस्पतालको शवको लागि एक जना मान्छे र ट्रक दिनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, केही शवको दाहसंस्कारको लागि रकम पनि दिनुभएको हो । बा आमा घरको शिलान्यासको बेला मन्त्री थममाया थापा तथा मेयर साप पनि आउनुभएको थियो । महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि केही आर्थिक समयोग गर्नुभएको छ । तर, त्यो सहयोग पर्याप्त छैन ।
तपाई जनचेतनामूलक कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुहुन्छ है ? के–के गर्नुहुन्छ ?
मैले लागूऔषध दुव्र्यसनीबाट बेवारिसे बसेका मान्छेहरुलाई निशुल्क उपचार गरिरहेका छौं भने परामर्श दिने काम पनि गर्छौं । मैले यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गाउँ गाउँमा गएर गर्ने गरेको छु । यस्ता कार्यक्रमहरु धेरै जिल्लाहरुमा भइसकेका छन् । आफ्नै खर्चमा यस्ता कार्यक्रमहरु हुँदै आएका छन् । कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि कलाकारहरु पनि लिएर जाने गरेको छु । काभ्रेको कोशीपारीमा पनि आश्रम खोल्ने सोच बनाइरहेका छौं । काठमाडौँमा भन्दा त्यहाँ खोलिने आश्रम बढी प्रभावकारी हुने हामीले देखेका छौं । यसमा तपाईहरु सबैको सहयोग छ ।
अब तपाईको जीवन कसरी अघि बढ्ला ?
अब कति नै बाँचिएला र ! २०–३० वर्ष नै त होला । बाँकी जीवन पनि समाज सेवामा खर्चिनेछु । कोही पनि सडकमा बेसाहार भएर लडेको/मेरेको देख्न नपरोस् । जीवनमा भव्य गरेमा बस्ने, गाडी चढ्ने सोच छैन । बेवारिसेहरुले भनेको बेला दागबत्ति पाउन् । बा आमा घर प्रत्येक जिल्लामा बनाउने सोच छ । यसको लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।